Makeover Application Somali
Foomka Codsiga ee Meaningful Makeover
Beerista Aqoontu waa Ka faa’idaysiga Waqtiga ina soo haya ee Barnaamijka Meaningful Makeover!
Waa maxay Maykofar?
Inta aynu ku guda jirno dhammaadka wiiga, Koox ayaa kula shaqayn doonta si aad u “bedesho” xanaanaynta caruurta ee Qoyskaaga. Dhammaan khibrada ku jirta waa laguu koobayaa. Si aad wax badan uga barato, waxaad daawataa xalqadihii hore ee bogga Meaningful Makeover.
Si loo faafiyo kelmada ku saabsan farxada, midho-dhalinta iyo fayow qabka deegaanka caruurnimo ee dhiiri-gelinaysa waxbarashada! Beeriska Aqoontu waa qabashada isbedel, si loo bixiyo tusaalo cad oo ku saabsan waaqica, kaas oo aad ula xidhiidha, la maamuli karo iyo lana awoodi karo.
Marka Koowaad – Waan kula kulmaynaa oo waxaan indho-indhaynaynaa hawl-gal kaagu intuu leegyahay kadibna waxaan kaa caawinaynaa barta uu noqonayo isbedelkaagu. Tani wax kharash dheeraad ah kuma siyaadinayso barnaamijkaaga laakiin waxay kaaga baahan tahay waqtigaaga, debecsanaantaada iyo weliba rabitaanka aad doonayso inaad nala shaqayso.
Waxa xiga – Waan qabanay isbedelkii! Qorshuhu waa inaan isbedelka samayno dhammaadka wiiga si aanay kaaga soo dhexgelin saacadahaaga shaqada ee caadiga ah.
Ugu danbayn – Waan kugu soo noqonaynaa si aan u aragno sida isbedelku u shaqaynayo. Waxaanu waraysi la yeelanaynaa Maamulaha, Macamiliimta iyo Caruurta yayar ee la fal-gelaysa deegaanka.
Xaqlaha daryeelka caruurta ee qoyskaaga, shaqaalo dheeraad ah, amaba waalidka (Ikhtiyaari ah) iyo Caruurta!
Maxaa layga doonayaa inaan qabto?
•	Waxaad na siisaa tilmaan iyo talooyin.
•	Soo hel foomamka warbaahinta lagu heshiiyay ee ay saxeexeen qoyska iyo shaqaaluhuba.
•	Waqti u samee kulanka ka hor isbedelka, isbedelka u hel waqtiga dhammaadka wiiga, samee waraysi ka horreeya iyo booqasho.
Su’aalo? Fadlan nagala soo xidhiidh cultiv8@uw.edu
Magaca Qoyska Daryeelka Ilmaha
Tirada Caruurta La Qoray
Magaca Waalidkaaga, Iimayl iyo/ama Moobayl Nambar
Si kooban noogu sheeg sababta aad ugu qayb-qaadanayso barnaamijka Meaningful Makeover?
Waa maxay caqabada ugu weyn ee kaa soo waajahday Waxbarashada deegaankaaga ee aad u baahan tahay in lagaa caawiyo?